InboxAware: Meeleynta Sanduuqa Email, Samatabbixinta iyo La-socodka Sumcadda | Martech Zone
InboxAware: Meeleynta Inbox Email, Samatabbixin iyo Korjoogteyn Sumcad
U -dirista emaylka sanduuqa sanduuqa ayaa sii ahaan doonta hab -wareer ku yimaada ganacsiyada sharciga ah maadaama kuwa wax basaasa ay sii wadaan xadgudubka iyo dhaawaca warshadaha. Sababtoo ah waa wax aad u fudud oo aan qaali ahayn in la diro emaylka, spammers -yada ayaa si fudud uga boodi kara adeegga ilaa adeegga, ama xitaa qorista ay iyagu u diraan server -ka. Bixiyeyaasha adeegga internetka (ISPs) ayaa lagu qasbay inay xaqiijiyaan soo dirayaasha, dhisaan sumcado diraya cinwaanada IP-ga iyo cinwaanada, iyo sidoo kale inay hubiyaan heer kasta oo emayl ah si ay isugu dayaan una soo qabtaan dambiilayaasha.
Nasiib darrose, iyada oo loo marayo taxaddar fara badan, ganacsiyada badanaa waxay isku arkaan inay ku dhegan yihiin algorithms iyo emaylladooda si toos ah ayaa loogu rogaa shaandhada qashinka. Markii loo gudbiyay galka qashinka, iimaylka ayaa farsamo ahaan loo keenay iyo; taasi waxay keentay in shirkadaha ay iska indho tirayaan xaqiiqda ah in macaamiishooda macaamiisha ah aysan waligood helin farriintooda. In kasta oo wax-soo-saarka la isticmaali jiray si toos ah loogu nisbeeyo tayada adeeg bixiyaha emaylkaaga, soo-dejinta ayaa hadda ku tiirsan oo keliya algorithms-ka.
Iyadoo aan loo eegin inaad adigu dhistay adeeggaaga, aad ku jirto cinwaanka IP -ga la wadaago, ama cinwaanka IP -ga oo go'an… waa muhiim inaad la socoto meelaynta sanduuqaaga. Iyo, haddii ay dhacdo inaad u haajirto adeeg bixiye cusub iyo diirinta cinwaanka IP-ga, kormeerka gabi ahaanba waa geedi socod muhiim ah si loo hubiyo in fariimahaaga ay arkeen macaamiishaadu.
Si si sax ah loola socdo in emaylkoodu ka sameeyay sanduuqa halkii uu ka ahaan lahaa galka qashinka, waa inaad galisaa liisaska abuurka ee macaamiisha ISP-yada oo dhan. Tani waxay awood u siineysaa suuqleyda emailka inay la soco meelaynta sanduuqa ka dibna la xalliyo arrimaha heerka sugida, heerka sumcadda, ama heerka emaylka si loo aqoonsado sababta emayladooda loogu rogi karo faylalka qashinka ah.
Barxadda Soo-Saarista InboxAware
InboxAware waxay leedahay dhammaan astaamaha muhiimka ah ee looga baahan yahay kormeerka meelaynta sanduuqa emaylkaaga, sumcadda, iyo guud ahaan wax-qabadka:
Kormeerka Sumcadda Email - Ku hel nabadgelyo maskaxda digniinta otomaatiga ah iyo kormeerka marinka. Deji marinka aqbalidaada oo aan kuu sheegno marka wax khalad u muuqdaan.
Tijaabada Liiska Abuurka - oo loo ekeysiiyay dhaqamadii ugu fiicnaa ee ay adeegsadeen khubarada emaylka, kormeerka meelaynta sanduuqa InboxAware waxay u saamaxaysaa suuq -yaqaanka iimaylka inay aqoonsadaan oo ka adkaadaan shaandhaynta xaqiijinta iyo dabinnada spam ee joojin kara emaylkaaga ka hor intaadan garaacin dirista.
Warbixinta Samatabbixinta - InboxAware waxay siisaa dadka isticmaala aragti hufan oo cabiran dhammaan macluumaadka emaylkooda, oo la sifeyn karo lana kala diri karo iyadoon loo dhoofin warbixin-akhrin oo keliya.
InboxAware waxay kuu oggolaaneysaa inaad habeysid shaashaddaada adoo ka dooranaya aalado badan oo warbixinno ah oo aad ku habeynaysid waxqabad fudud oo jiidis iyo-dhibic ah Abaabulkooda ballaaran ee qalabka is-dhexgalka ayaa kormeeraya waxqabadkaaga emaylka ee tilmaamayaasha badan.
Ballanso InboxAware Demo
Shaacinta: Waxaan ka faa'iideysaneynaa xiriiriyeyaasha xiriirka la leh qodobkaan.
Tags: samatabbixinmadal samatabbixingaarsiinta emaylkasumcadda emailkamaareynta sumcadda emaylkaemail ilaalinta kormeerkakormeerka sanduuqainboxawareliiska abuurka
Casharrada Laga Bartay: Is-bar-dhigyada Warbaahinta Bulsheed iyo Qaadashada Maskaxda ee Blockchain
Seddex Dariiqo oo lagu Xaqiijiyo Ka Qeyb Qaadashadaada Shaashadda Yar Yeelaneyso Saameyn Weyn